Indlu yeeNdwendwe yaseKumkani uArthur-iApartment (204)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGábor
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGábor iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifumaneka kumgangatho we-204, le ndlu inekhitshi elahlukileyo elinezixhobo. Ikhitshi inesofa enomoya ekwazi ukuguqulwa ngokulula ibe yibhedi yeendwendwe. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngeebhedi ezi-2 ezingatshatanga (100x200) ezinokuthi ziguqulwe zibe yibhedi ephindwe kabini xa iceliwe. Kukho indawo yokuhlala yefenitshala yegadi kwi-terrace yangaphakathi yamagumbi aphezulu
Ifumaneka kumgangatho we-204, le ndlu inekhitshi elahlukileyo elinezixhobo. Ikhitshi inesofa enomoya ekwazi ukuguqulwa ngokulula ibe yibhedi yeendwendwe. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngeebhedi ezi-2 ezingatshatanga (100x200) ezinokuthi ziguqulwe zibe yibhedi ephindwe kabini xa iceliwe. Kukho indawo yokuhlala yefenitshala yegadi kwi-terrace yangaphakathi yamagumbi aphezulu.
Indlu yeendwendwe kukuhamba imizuzu embalwa ukusuka embindini kwaye kukho indawo yokuthenga kwindawo ekufutshane. Kukho ukufikelela ngokulula kwiibhanki kunye nee-ATM, ezikwakumgama wokuhamba wendlu yeendwendwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Gábor
Inombolo yomthetho: PA19001572